Domperidone Inaliti - China Ningbo Second hormone
Operation Manual of Domperidone Inaliti Veterinary 【Name of Veterinary Drug】 【Common Igama】: Inaliti Domperidone 【IsiNgesi Igama】: Inaliti Domperidone 【Igama Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye 【Major Ingredient】: Domperidone 【Inkcazo】: Le mveliso ulwelo enemibala ecacileyo 【amayeza Action】: kuyinto ochasene dopamine receptor; Domperidone enokuthintela dopamine ukusuka okubambezelayo wentlanzi nokukhutshwa GTH kunye ovulation kwakunye siqinise LHRH-A2 kunye sGnRH-A eyenza GT ...
Operation Manual of Domperidone Inaliti
【IsiNgesi Igama】: Inaliti Domperidone
【Igama Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye
【Inkcazelo】: Le mveliso ulwelo enemibala ecacileyo
【Amayeza Action】: Kuyinto ochasene dopamine receptor; Domperidone enokuthintela dopamine ukusuka okubambezelayo wentlanzi nokukhutshwa GTH kunye ovulation kwakunye siqinise LHRH-A -2 kunye sGnRH-A eyenza GTH ukukhululwa ovulation.
【Ziveza】: It ngokudibeneyo ingasetyenziswa nge LHRH-A -2 ukuze induction ngumntu of empathema kunye ovulation kweentlanzi
【Ukusetyenziswa kunye Izikali】: Okokuqala, yaze yangxenga ifuthe lomanyano le mveliso kunye isixa eyiyo saline eqhelekileyo de zonke milliliter yamanzi iqulethe 5 ~ 10mg domperidone. Okwesibini, mix LHRH-A 2 ukuba isitofu kunye saline eqhelekileyo ukufumana LHRH-A -2 isisombululo kunye xi 5 ~ 20μg / ml. Lungisa umthamo efunekayo uxube izisombululo ezimbini ngasentla. Emva koko, isicelo umxube isitofu intraperitoneal (isiseko pectoral fin) okanye inaliti ye intramuscular (kufutshane kumazantsi amaphiko). Esithathwa iintlanzi ababhinqileyo ngekhilogram nganye ngolu hlobo lulandelayo:
zeCARP, zeCARP crucian zeCARP ingca neKubhi, bighead uDace bream clarias fuscus loach megalobrama amblycephala ilishaeformis Erythroculter
Black zeCARP kufuneka izitofu ezimbini. Esithathwa ngokuba naliti lokuqala: DOM 5mg + LHRH-A 2 5μg; i naliti yesibini yanikwa 24 ~ 48 kwiiyure kamva kunye umthamo DOM 5mg + LHRH-A 2 10μg.
Male fish umzali kufuneka kuphela 1/2 esithathwa kungasentla female iintlanzi umzali
【Akaziphatha Drug Reaction】 Akukho simo iziyobisi egwenxa ifumaneka xa kulandelwa idosi ecetyiswayo.
【Imiba Ufuna Attention】:
1. fish lomzali usebenzisa le mveliso Akuvunyelwe ukuba badle ngabantu
2. Inokuba ukuqinisekisa ukusebenza ngcono kwiqondo lobushushu amanzi a ka 20 ~ 30 ℃. Ukuba lobushushu yamanzi ungaphantsi kwama-20 ℃, iziphumo zidala induction iya kuchaphazeleka kancinci.
3. oyidlayo ngokugqithiseleyo aphezulu kunokubangela ovulation kwangethuba yaye iya kuchaphazela izinga lokuzala.
4. Kubhetele ukuba alungiselele ichiza phambi kokuba uyisebenzise. Ichiza uzilungiselele kufuneka lesitofu kwisithuba seyure 0.5-1.
【Ukucaciswa】: 2ml: 100mg
【Umqulu】: 10pcs iphakheji ngamnye
Previous: Compound S-GnRHa Kuba Inaliti (Ovuhom)
Okulandelayo: LHRH-A2 ukusetyenziswa Fish Inaliti
trout Farms hormone Kuba Fish zokuzalela Ovaprim, Phucula amaqanda Ovaprim